23 “Ahụhụ ga-adịrị ndị ọzụzụ atụrụ ndị na-egbu atụrụ ndị nọ n’ebe ịta nri m, na-achụsasịkwa ha!”+ ka Jehova kwuru. 2 Ya mere, nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru megide ndị ọzụzụ atụrụ na-azụ ndị m dị ka atụrụ: “Unu achụsasịwo atụrụ m; unu na-emekwa ka ha gbasasịa, unu elebaraghị ha anya.”+ “Lee, m ga-elebara unu anya n’ihi omume ọjọọ unu,”+ ka Jehova kwuru. 3 “M ga-esi n’ala niile m chụsasịrị atụrụ m chịkọta ndị fọdụrụ n’ime ha,+ m ga-akpọghachi ha n’ala ịta ahịhịa ha,+ ha ga-amụ ọmụmụ, baakwa ụba.+ 4 M ga-enye ha ndị ọzụzụ atụrụ ga na-azụ ha dị ka atụrụ;+ ha agaghịkwa atụ egwu ọzọ, ụjọ ọ bụla agaghịkwa atụ ha,+ ọ dịghịkwa nke ga-efu efu n’ime ha,” ka Jehova kwuru. 5 “Lee! Oge na-abịa,” ka Jehova kwuru, “mgbe m ga-eme ka ome ezi omume puoro Devid.+ Otu eze ga na-achị+ ma jiri ezi uche na-eme ihe, na-ekpekwa ikpe ziri ezi ma na-eme ezi omume n’ala a.+ 6 N’oge ọchịchị ya, a ga-azọpụta Juda,+ Izrel ga-ebikwa n’obi iru ala.+ Aha a ga na-akpọ ya bụ, Jehova Bụ Ezi Omume Anyị.”+ 7 “Ya mere, lee! oge na-abịa,” ka Jehova kwuru, “mgbe ha na-agakwaghị asị, ‘Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ, bụ́ onye si n’ala Ijipt kpọpụta ụmụ Izrel,’+ 8 kama ha ga-asị, ‘Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ, bụ́ onye si n’ala dị n’ebe ugwu nakwa n’ala niile m chụsasịrị mkpụrụ nke ụlọ Izrel kpọpụta ha wee kpọlata ha,’ ha ga-ebikwa n’ala nke ha.”+ 9 Obi agbawaala m n’ihi ndị amụma. Ọkpụkpụ m amalitewo ịma jijiji. Adị m ka onye mmanya na-egbu,+ dị ka dimkpa nke mmanya ji, n’ihi Jehova nakwa n’ihi okwu ya dị nsọ. 10 N’ihi na ndị na-akwa iko+ juru n’ala a.+ N’ihi na ala a na-eru uju n’ihi ọbụbụ ọnụ,+ ahịhịa dị n’ala ịta ahịhịa ndị dị n’ala ịkpa akpọnwụwo;+ omume ha dị njọ, ike ha na-akpa ezighịkwa ezi. 11 “N’ihi na e merụwo ma onye amụma ma onye nchụàjà.+ Ahụwokwa m ihe ọjọọ ha na-eme n’ụlọ m,”+ ka Jehova kwuru. 12 “Ya mere, ụzọ ha ga-adịrị ha ka ebe na-amị amị,+ nke ọchịchịrị gbara, bụ́ ebe a ga-enuba ha, ha adaa.”+ “N’ihi na m ga-eme ka ọdachi dakwasị ha n’afọ a ga-elebara ha anya,”+ ka Jehova kwuru. 13 “Ahụwokwa m omume na-ezighị ezi ndị amụma nọ na Sameria na-eme.+ Ha ebuwo amụma n’aha Bel,+ ha na-emekwa ka ndị m bụ́ Izrel na-awagharị.+ 14 Ahụwokwa m ihe jọgburu onwe ya ndị amụma nọ na Jeruselem na-eme,+ ha na-akwa iko,+ na-ejekwa ije n’okwu ụgha;+ ha emewo ka aka ndị ajọ omume dị ike, ka onye ọ bụla n’ime ha wee ghara ịhapụ ihe ọjọọ ọ na-eme lọghachi.+ N’anya m, ha niile dị ka Sọdọm,+ ndị bi n’ime ya dịkwa ka Gọmọra.”+ 15 Ya mere, nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru megide ndị amụma ahụ: “Lee, m ga-eme ka ha taa ahịhịa ilu, m ga-enyekwa ha mmiri e tinyere ihe na-egbu mmadụ ka ha ṅụọ.+ N’ihi na ịdapụ n’ezi ofufe+ esiwo n’aka ndị amụma nọ na Jeruselem gazuo ala a dum.” 16 Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru: “Egela ntị n’ihe ndị amụma, bụ́ ndị na-eburu unu amụma, na-ekwu.+ Ha na-eme ka unu bụrụ ihe efu.+ Ọ bụ ọhụụ nke si n’obi ha ka ha na-ekwupụta+—ọ bụghị nke si n’ọnụ Jehova.+ 17 Ugboro ugboro ka ha na-asị ndị na-adịghị asọpụrụ m, ‘Jehova sịrị: “Udo ga-adịrị unu.”’+ Ha na-agwakwa onye ọ bụla nke na-eje ije dị ka isi ike nke dị n’obi ya si dị,+ sị, ‘Ọ dịghị ọdachi ga-adakwasị unu.’+ 18 N’ihi na ònye guzoworo n’etiti ìgwè ndị ha na Jehova na-akpachi anya+ ka ọ hụ ma nụ okwu ya?+ Ònye ṅaworo ntị n’okwu ya ka o wee nụ ya?+ 19 Lee! Oké ifufe Jehova, ya bụ, ọnụma ya, ga-amalite ife, ọbụna oké ifufe na-efesi ike.+ Ọ ga-efekwasị ndị ajọ omume n’isi.+ 20 Iwe Jehova agaghị adajụ ruo mgbe o mere+ ihe dị ya n’obi, ruokwa mgbe o mezuru ya.+ N’oge ikpeazụ, unu ga-echebara ya echiche wee ghọta ya.+ 21 “Edunyeghị m ndị amụma ahụ, ma ha onwe ha gbaara ọsọ gawa. Agwaghị m ha ihe ọ bụla, ma ha onwe ha buru amụma.+ 22 Ma a sị na ha guzoro n’etiti ndị mụ na ha na-akpachi anya,+ ha gaara eme ka ndị m nụ okwu m, ha gaara eme ka ha hapụ ụzọ ọjọọ ha na omume ọjọọ ha.”+ 23 “Àbụ m Chineke nọ nso,” ka Jehova kwuru, “ma ghara ịbụ Chineke nke nọ ebe dị anya?”+ 24 “Ka ọ̀ dị onye pụrụ izo n’ebe nzuzo, mụ onwe m ewee ghara ịhụ ya?”+ ka Jehova kwuru. “Ọ̀ bụ na mụ onwe m ejupụtaghị eluigwe na ụwa?”+ ka Jehova kwuru. 25 “Anụwo m ihe ndị amụma, bụ́ ndị na-ebu amụma ụgha n’aha m,+ kwuru, sị, ‘Arọrọ m nrọ! Arọrọ m nrọ!’+ 26 Ruo ole mgbe ka ọ ga-adịgide n’obi ndị amụma, bụ́ ndị na-ebu amụma ụgha, ndị na-eji aghụghọ dị n’obi ha ebu amụma?+ 27 Ha na-eche echiche iji nrọ ha na-akọrọ ibe ha mee ka ndị m chefuo aha m,+ dị nnọọ ka ndị nna ha chefuru aha m n’ihi Bel.+ 28 Onye amụma nke rọrọ nrọ, ya kọọ nrọ ya; ma, onye okwu m ruru ntị, ya jiri eziokwu kwuo okwu m.”+ “Gịnị gbasara okporo ọka na mkpụrụ ọka?”+ ka Jehova kwuru. 29 “Ọ̀ bụ na okwu m adịghị ka ọkụ,”+ ka Jehova kwuru, “dịrịkwa ka hama e ji akpụ ụ́zụ́, nke na-akụri nkume dị elu?”+ 30 “Ya mere, lee, m na-emegide ndị amụma,”+ ka Jehova kwuru, “bụ́ ndị na-ezuru okwu m n’ohi n’ọnụ ibe ha.”+ 31 “Lee, m na-emegide ndị amụma,” ka Jehova kwuru, “bụ́ ndị na-eji ire ha ekwu okwu, sị, ‘Nke a bụ ihe o kwuru!’”+ 32 “Lee, m na-emegide ndị amụma na-arọ nrọ ụgha,” ka Jehova kwuru, “ndị na-akọ nrọ ha wee na-eme ka ndị m na-awagharị n’ihi okwu ụgha ha+ nakwa n’ihi ịnya isi ha.”+ “Ma ọ bụghị m dunyere ha, ọ bụghịkwa m nyere ha iwu. Ya mere, ha agaghị abara ndị a uru ọ bụla,”+ ka Jehova kwuru. 33 “Mgbe ndị a ma ọ bụ ndị amụma ma ọ bụ ndị nchụàjà ga-ajụ gị, sị, ‘Gịnị bụ ibu arọ Jehova?’+ ị ga-asịkwa ha, ‘“Ọ bụ unu bụ ibu dị arọ!+ M ga-agbahapụkwa unu,”+ ka Jehova kwuru.’ 34 Onye amụma ma ọ bụ onye nchụàjà ma ọ bụ onye nkịtị nke na-asị, ‘Lee ibu arọ Jehova!’ m ga-elebara onye ahụ na ezinụlọ ya anya.+ 35 Onye ọ bụla n’ime unu na-ajụ ibe ya, na-ajụkwa nwanne ya, sị, ‘Gịnị ka Jehova zara? Gịnịkwa ka Jehova kwuru?’+ 36 Ma unu ekwula okwu ọzọ banyere ibu arọ+ Jehova,+ n’ihi na okwu onye ọ bụla kwuru na-aghọrọ onye kwuru ya ibu arọ,+ unu agbanwewokwa okwu Chineke dị ndụ,+ bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, bụ́ Chineke anyị. 37 “Nke a bụ ihe ị ga-ajụ onye amụma ahụ, ‘Gịnị ka Jehova zara gị? Gịnịkwa ka Jehova kwuru?+ 38 Ọ bụrụ na unu ana-asị, “Lee ibu arọ Jehova!” n’ihi ya, nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ebe ọ bụ na unu na-asị, ‘Okwu a bụ ibu arọ Jehova,’ mgbe m na-ezitere unu ozi, sị, ‘Unu asịla: “Lee ibu arọ Jehova!”’ 39 ya mere, leenụ m! Aghaghị m ileghara unu anya,+ m ga-agbahapụkwa unu na obodo m nyere unu na nna nna unu hà—unu ga-apụ n’ihu m.+ 40 M ga-eme ka nkọcha bịakwasị unu ruo mgbe a na-akaghị aka, wetakwara unu mweda n’ala nke ga-adịru mgbe a na-akaghị aka, nke a na-agaghị echefu echefu.”’”+